Oké ifufe na Atlantic: akpata na mgbanwe ihu igwe | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 12/01/2022 10:00 | Ihe gbasara ihu igwe
N'ihi mgbanwe ihu igwe na mmụba nke okpomọkụ zuru ụwa ọnụ anyị na-enwe mgbanwe dị iche iche n'ụdị ikuku na oke osimiri. N'okwu a, oke osimiri Atlantic na-adọ aka ná ntị banyere mgbanwe ọ na-enwe n'ihi mgbanwe ihu igwe. Nke oké ifufe na Atlantic ha na-abawanye ma na ha guzobe nke ifufe na ifufe ike ifufe.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ndị bụ ihe kpatara mmụba nke oké ifufe na Atlantic na gịnị ga-esi na mgbanwe ihu igwe na-esi na Atlantic Ocean na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ.
1 Oké ifufe na Atlantic
2 Oke ifufe na-abawanye na Atlantic
3 Anomalies na oge 2020
4 Ọmụmụ mgbanwe ihu igwe
Oke osimiri Atlantic na-adọ aka na ntị. Nke a bụ nchịkọta nke mgbanwe mgbanwe ikuku ikuku hụrụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya na-emetụta ugwu Macaronesia, mpaghara nke gụnyere Azores, Canary Islands, Madeira na agwaetiti ọzara, na ndịda ọdịda anyanwụ nke Iberian Peninsula. Ihe niile na-ezo aka na ihu igwe mpaghara na-atụgharị na okpomọkụ.
Ebe ọ bụ na ọbịbịa akụkọ ihe mere eme na 2005 nke oké mmiri ozuzo Delta na Canary Islands, ọnụ ọgụgụ nke cyclone okpomọkụ na-agafe na mpaghara ndị a. abawanyela nke ukwuu n'ime afọ iri na ise gara aga. Igwe mmiri ozuzo ndị a bụ mpaghara ihu igwe dị ala siri ike ma anaghị egosipụta ụdị omume nke oke mmiri ozuzo n'etiti latitude ma ọ bụ cyclones ndị na-ekpo ọkụ nke anyị na-eji na mpaghara a nke mbara ala. Kama nke ahụ, ha na-egosipụta àgwà yiri nke cyclone okpomọkụ nke na-emetụtakarị Caribbean n'akụkụ nke ọzọ nke Atlantic.
N'ezie, ihe omume ndị a na-eyiwanye ka cyclones okpomọkụ na nhazi na ọdịdị. Nke ukwuu nke na US National Hurricane Center amụbawo nnyocha na nlekota nke anyị mmiri n'afọ ndị na-adịbeghị anya, na-akpọ a bụghị inconsiderable otu nke ndị a phenomena.
Oke ifufe na-abawanye na Atlantic
Anomaly a kpọtụrụ aha n'elu abawanyela n'ime afọ ise gara aga. Anyị nwere ọmụmaatụ ama ama:
Ajọ Ifufe Alex (2016) Ọ mere na ndịda nke Azores, ihe dịka 1.000 km site na Canary Islands. Site n'ikuku kacha nke dị kilomita 140 kwa elekere, ọ na-erute ọnọdụ ajọ ifufe wee na-akwọ ụgbọ mmiri n'ụzọ pụrụ iche gafee North Atlantic. Ọ ghọrọ ajọ ifufe mbụ malitere na Jenụwarị kemgbe 1938.
Hurricane Ophelia (2017), nke mbụ Saffir-Simpson Category 3 ifufe dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Atlantic kemgbe ihe ndekọ malitere (1851). Ophelia nwetara oke ikuku na-adịgide karịa ihe karịrị kilomita 170 kwa elekere.
Ajọ Ifufe Leslie (2018), ifufe mbụ rutere nso n'ụsọ oké osimiri (100 km). O were ifufe ruru kilomita 190 n'otu elekere were daa Portugal n'isi ụtụtụ.
Ajọ Ifufe Pablo (2019), ajọ ifufe kacha nso malitere na Europe.
Dị ka oke mmiri ozuzo ikpeazụ ya, Tropical Storm Theta yiri agwaetiti Canary egwu, naanị kilomita 300 site na emetụta àgwàetiti ndị ahụ kpamkpam.
Na mgbakwunye na ikpe ndị a, enwere ndepụta ogologo na-eso ha ebe ọ bụ na ha adịghị oke mma ma na-emetụta akụkụ ndị ahụ e kwuru n'elu. N'ụzọ dị otú a, ugboro abawanyela otu ugboro n'afọ n'ime afọ ise gara aga, na ọbụna ihe karịrị otu ugboro n'ime afọ abụọ gara aga. Tupu 2005, ugboro ole bụ otu kwa afọ atọ ma ọ bụ anọ, na-egosighi nnukwu ihe egwu nke mmetụta.
Anomalies na oge 2020
Ụdị ụkọ a dabara n'ihe na-eme n'oge ajọ ifufe site na June ruo Nọvemba afọ a. Amụma na-arụtụ aka n'oge na-arụsi ọrụ ike nke na-ejedebe na cyclone 30, ihe ndekọ n'ezie. Nke ahụ pụtara ịkpọ aha ha site na iji mkpụrụedemede Greek, gafere oge 2005 mere eme.
N'aka nke ọzọ, a na-ejikwa oge ahụ bụ nnukwu ifufe na-arụ ọrụ nke Atiya 3 ma ọ bụ karịa. N'ezie, ọ na-esonyere oge anọ mbụ maka oge mbụ kemgbe ndekọ malitere (1851) na opekata mpe otu ajọ ifufe etolitela n'ụdị nke ise n'usoro oge ise. Nke ikpeazụ na-adaba n'atụmatụ mgbanwe ihu igwe, oke ifufe kachasi ike na-esiwanye ike ma na-adịkarị.
Ọmụmụ mgbanwe ihu igwe
Ekwesiri iburu n'uche na mmụba nke oké ifufe na Atlantic na ọnọdụ okpomọkụ nke akụkụ ụwa a metụtara mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Azịza ya bụ ee, mana a chọkwuru nyocha.. N'otu aka ahụ, anyị ga-amata mmekọrịta na ihe ndị a na-ahụ anya, na na Spain, anyị ka na-enweghị ikike nkà na ụzụ iji mepụta ụdị ọmụmụ ihe arụ ọrụ nke a na-eme na mba ndị ọzọ. Ihe anyị nwere ike ịmalite bụ mmekọrịta dabere n'ọmụmụ ihe gbasara amụma ọnọdụ ihu igwe n'ọdịnihu nke na-eche na ihe ndị a na-eme ugboro ugboro na mmiri mmiri anyị.
Nke a bụ ebe anyị nwere ike iwulite mmekọrịta, ọ bụ ezie na ọ dị mkpa nyocha ọzọ iji chọpụta na imeziwanye nkọwa nke ihe omume ndị a n'ọdịnihu iji meziwanye atụmatụ maka ime mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe na-atụ anya ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ ga-ekwe omume na adịla mgbe iru elu ike dị ka Atiya 3 ma ọ bụ karịaAjọ Ifufe na obere oke ikuku na-enwekwa nchegbu karịsịa n'ihi mmetụta dị ukwuu ha nwere na ụsọ oké osimiri US na a ghaghị ịgbakwunye na na Spain anyị akwadobeghị nke ọma maka nke a.
Ihe ọzọ a ga-atụle bụ na ha na-eweta ejighị n'aka karịa na amụma ha. N'adịghị ka ebe okpomọkụ, ebe a na-emetụta ụzọ cyclone site na ihe ndị a na-atụghị anya ya, ka cyclones ndị a na-amalite ịbịaru nso n'etiti latitudes anyị, ha na-amalite inwe mmetụta site na ihe ndị na-adịghị ahụkebe, na-amụba ejighị n'aka. Akụkụ ọzọ dị mkpa bụ enwere ike inwe mmetụta kacha ukwuu mgbe ha malitere ịmalite n'ime oke mmiri ozuzo nke etiti latitude, mgbanwe nke a maara dị ka mgbanwe mgbanwe okpomọkụ, nke nwere ike ime ka ha gbasaa oke ha.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa iburu n'uche na ejighị n'aka na ọ ga-ekwe omume na ọnọdụ dị n'ime ihe ahụ anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụ ezie na a na-atụle mgbanwe ndị a niile n'ihe ndekọ akụkọ ihe mere eme site na 1851, n'ezie site na 1966 ka ndekọ ndị a. enwere ike iwere ya dị ka ihe siri ike yana atụnyere nke oge anyị dị ugbu a, n'ihi na nke ahụ bụ mmalite nke ihe ga-ekwe omume. Jiri satịlaịtị lelee ha. Ya mere, ekwesịrị iburu nke a n'uche mgbe niile mgbe ị na-enyocha usoro a na-ahụ na cyclones na oke ifufe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe kpatara mmụba nke oké ifufe na Atlantic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ifufe na Atlantic